Ofisialy, Xiaomi dia nanambara ny fanolorana ny Mi 9 ho an'ny 24/02 | Androidsis
Ofisialy, Xiaomi dia nanambara ny fanolorana ny Mi 9 ho an'ny 24/02
Rafa Rodriguez Ballesteros | | About us, Xiaomi
Niandry izany izahay. Ny datin'ny fanombohana ny Xiaomi Mi 9 Tena akaiky izy io, ary ho tanteraka izany. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy i Xiaomi amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo izay eNy 24 febroary ho avy izao no daty voafidy ho an'ny fanolorana ny Mi 9. Andro vitsy lasa izay dia naneho hevitra izahay fa tena azo atao ny tonga ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona ity modely ity. Na dia andro ara-drariny aza no havoaka amin'ny farany ary azo antoka fa azontsika atao ny mankafy azy eo amin'ny toeran'ny orinasa.
Xiaomi amin'ny alàlan'ny kaonty ofisialy no nanamafy ny daty. Ary efa naneho antsika koa izy io sary vitsivitsy misy fijery mahavariana. Ilay maodely manga mamirapiratra hitantsika dia mampiseho tsipika manintona, goavambe Fampirantiana voahitsaka ary zavatra misongadina ao aorina, a fakan-tsary telo.
1 Xiaomi mametraka ny daty tsy misy be pitsiny
2 Ny Xiaomi Mi 9 dia manondro ny lamaody fakantsary 3
3 Hery sy fahamendrehana mifanome tanana
Xiaomi mametraka ny daty tsy misy be pitsiny
Voamarina izany, hanana iray volana febroary ho feno vaovao isika. Fahagagana ho an'ireo mpankafy rehetra amin'ny tontolon'ny smartphone. Efa tsy nahita vaovao tao amin'ity sehatra ity izahay ary ankasitrahana ny vaovao tsara. Nefa indray mandeha? Araka ny fantatsika, satria nanambara azy io hatrany, ny andro Ny 20 febroary no daty ofisialy izay hanoloran'i Samsung ny fianakaviany vaovao Galaxy S10. Fa izany ve tamin'io andro io ihany 24, Nokia dia efa nanambara ny fampisehoana ny finday avo lenta misy fakan-tsary dimy, ny Nokia 9 Mash View.
Ity volana febroary ity dia tena hatanjaka amin'ny resaka vaovao, nanomboka Afaka 4 andro dia hihaona amin'ny fitaovana 3 nandrasana fatratra izahay. Ary aorian'io fotoana io dia hanomboka ny MWC amin'ity taona ity, izay antenaina koa ny vaovao avy amin'ny orinasa maro hafa. Misokatra ny ady daty, ny famelabelarana dia hifanitsaka. Noho izany Fotoana hankafizana ireo filokana vaovao isaky ny orinasa.
Ny Xiaomi Mi 9 dia manondro ny lamaody fakantsary 3
Io no tena mahavariana raha vao mahita ny sary voalohany amin'ny Xiaomi Mi 9 vaovao. Torohevitra telo no miorina mitsangana amin'ny ilany havia amin'ny lamosina. Ity ambany ity fotsiny ny Tselatra LED, ary koa ny tsy fisian'ny manaitra, ilay mpamaky ny rantsantanana. Tsy any aoriana ity iray ity Mety hidika izany fa efa manana mpamaky rantsan-tànana eo ambanin'ny efijery ity fitaovana ity, tsy isalasalana fa zava-baovao iray izay horaisin'ireo mpampiasa.
Ny fakantsary Xiaomi Mi 9 dia anisan'ny manintona indrindra azy. Hatramin'izao, tsy maro ireo mpanamboatra no sahy nampita ny terminal-dry zareo tamin'ny lasopy telo. Azo antoka fa aorian'ny dingana mandroso an'i Xiaomi, maro ny hafa no manaraka ny diany. Raha manantena finday avo lenta miaraka amina fakan-tsary mahery ianao, ny Mi9 dia mety ho iray amin'ireo safidinao tsara indrindra.
La fakantsary lehibe manana sensor, na mihoatra na latsaky ny Fanapahan-kevitra 48 Megapiksel. Etsy ambany, ny sensor faharoa an'ny solomaso faharoa dia manana Fanapahan-kevitra 12 Megapixel. Ary ny solomaso fahatelo manana a fakan-tsary antsoina hoe 3D ToF (Fotoanan'ny sidina) miaraka amin'ny aingam-panahy mazava hitantsika ao amin'ny Honor View 20.
Hery sy fahamendrehana mifanome tanana
Anisan'ireo tombontsoa hafa azontsika asongadina ny: ny processeur-nao. Ny Xiaomi Mi 9 dia hihazakazaka miaraka amin'ny Qualcomm Snapdragon 855, puce iray koa andrasana fatratra amin'ny heriny sy ny fahombiazany arosony. Hanana mpampitohy izy io USB Type C, ary manjavona, manaraka ny fironana, ny seranan-tsambo jack headphone. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny 27W fiampangana haingana.
La Fifandraisana NFC Ho eo ihany koa ny hanomezana ny Mi 9 fiasa manara-penitra kokoa. Ny baterinao dia ho 3.500 Mah, enta-mavesatra izay ny priori dia toa tsy olana lehibe, fa noho ny fanatsarana tsara ireo singa dia mampanantena fahombiazana amin'ny haavon'ny ambiny.
Raha raisina ny herin'ny Xiaomi Mi 9, ankoatry ny fananana ny iray amin'ireo chips Qualcomm farany teo. Manana a RAM 6GB, izay vitan'ny fahaizan'ny Fitehirizana 128GB. Izany rehetra izany dia eo ambanin'ny sivana an'ny MIUI sosona 10 izany, araka ny efa fantatsika, dia mikoriana mahafinaritra.
Farany, raha mijery isika ny efijeryo, ary mihatsara hatrany ny raharaha. Tontonana amoled miaraka amina dragona 6,4 santimetatra. Glass iray izay manana ny kinova farany azo antoka momba ny fiarovana Corning Gorilla Glass 5. Ary ao no ahitantsika a fefy kely mitete mitete izay tianay be. Tsy antenainao hihaona aminy manokana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ofisialy, Xiaomi dia nanambara ny fanolorana ny Mi 9 ho an'ny 24/02
Tafio-drivotra mahery sy zip no mahazo fiovana lehibe amin'ny fanavaozana Fortnite farany
Ny Samsung Galaxy M20 dia mety ho tonga tsy ho ela any Eropa